गगन र राजनसँग चुनावी मैदानमा उत्रिएका नयाँ शक्तिका उम्मेदवार भन्छन्, ‘भोज खुवाएर मत मागिन्न’ – Medianp
गगन र राजनसँग चुनावी मैदानमा उत्रिएका नयाँ शक्तिका उम्मेदवार भन्छन्, ‘भोज खुवाएर मत मागिन्न’
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर १८, २०७४०५:३५
टि आर शिवाकोटी
उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, काठमाडौं ४
तपाईका चुनाव एजेण्डा के हुन् ?
‘अबको निकास,आर्थिक विकास’ हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । हामीले आफ्नो लक्ष्य कालो धन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेका छौं । त्यस्तै यो देशले विकास गर्न नसक्नुको कारण संसदीय व्यवस्था हो । त्यकारण स्थीरता र समृद्धिको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय सरकार हाम्रो अर्को प्रमुख एजेण्डा हो ।
तपाईं काठमाडौं ४ बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । सो क्षेत्रका लागि के के योजना छन् ?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा म बस्दै आएको छु । मेरो घर बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्छ । म यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छु । म निर्वाचित भएँ भने ५ वर्ष गर्ने कामबारे मैले आफ्ना प्रतिवद्धता जनताकोबीचमा गरेको छु । पहिलो कुरा धुलोमुक्त सडक बनाउनेछु । बाटो कालोपत्रे गरि मास्क नलगाई हिँड्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछु । ढलनिकासको सही व्यवस्थापन गर्नेछु । सहरलाई कुरुप बनाउने गरि तार तान्द्राङतुन्द्रुङ झुण्डिएका छन् । भूमिगत तार राख्ने पद्धतीको विकास गर्नेछु । बुढानिलकण्ठको सिरानमा एउटा विशाल रिजर्ववेयर निर्माण गरि त्यसबाट सम्पूर्ण बुढानिलकण्ठ नगरवासीलाई पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । पशुपतिनाथ,बुढानिलकण्ठ क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछु ।
यहाँ जनताले तपाईलाई किन मत दिने ?
हामी र अरु पार्टीमा फरक छ । नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई नै पेशा बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । हामी कुनै पेशा नगर्ने लफंगाले राजनीति गर्ने होइन भन्छौं । राजनीति सेवा हो भन्ने सोच्छौं । अरु कुनै काम नगर्नेले राजनीति गर्यो भने त्यसले राजनीतिलाई सेवाका रुपमा लिन सक्दैन । यही कुरा फरक छ । म आशावादी छु । निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता भन्दा बाहिर गएको छैन । टोलटोलमा खसी काटेर,मासु र रक्सी खुवाएर मत मागेको छैन । जनताले विवेक प्रयोग गरेर मत दिए भने म निर्वाचन जित्छु ।
तपाईंहरुको पार्टीको लक्ष्य के हो ?
हाम्रो लक्ष्य समुन्नत समाजवाद हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभई यो देशले स्थायी सरकार पाउँदैन । स्थायी सरकार नभईकन आर्थीक विकास हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तन त भइसक्यो । अब आर्थीक समृद्धिमा जानुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाले स्थीरता आउँदैन । देश समृद्ध बन्दैन । केही स्वभाविक प्रगती बाहेक छलाङ मार्ने परिणाम आउँदैन ।
डा बाबुराम भट्टराई बाम गठबन्धनमा जानुभयो । केही दिनमा पछि हट्नुभयो र कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुभयो नी ?
बाबुराम भट्टराईलाई बाम गठबन्धनमा ल्याउने पुष्पकमल दाहालको चाहनै थिएन । केपी ओलीले चाहनुभएको थियो । धेरै छलफल हुँदा हामीले समुन्नत समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भन्दा ओलीजीले हामी पनि समाजवादकै पक्षमा छौं । नारा तपाईंजस्तो विद्धानले तय गर्यो नारा हामीलाई पच्दैन , पचिहाल्छ ।
एकदम मिल्छ हाम्रो लक्ष्य,नारा सबथोक मिल्छ भनेर केपी ओलीजीले बाबुराम भट्टराईलाई भनेपछि उहाँ बाम गठबन्धनमा जानुभयो । भोलीपल्टबाट प्रचण्डले खेल्न थाल्नुभयो । कहाँको समाजवाद रु साम्यवादमा जान छोडेर समाजवादमा ओर्लने हो रु परै जाने नी अब भन्न थाल्नुभयो ।
साम्यवादमा जान अहिले कोही सक्छ रु त्यो अवस्था छ रु कार्यकर्तामा एउटा साम्यवादी व्यक्ति छैन । प्रचण्डलाई विगार्नुथियो । त्यसपछि गोरखामा गएर कहिले गोरखाबाट नउठेका नारायणकाजीलाई उठाइयो । उहाँलाई रोक्नुस् भन्दा प्रचण्डले त्यस्तो गर्नुभएन । बाबुरा भट्टराई हो जहाँबाट उठेनी जितिहाल्नु हुन्छ नी । किन गोरखै चाहियो ? ।
बाबुरामजीले म जन्मेको, २ पटक चुनाव जितिसकेको ठाउँ , गरिबिको अवस्थाबमा पढेर त्यही ठाउँबाट बोर्डफस्र्ट गरेको ठाउँ ,जनताले बचपनदेखि प्रशंशा गरेको ठाउँ । मैले क्षेत्र छोड्ने कुरा मिल्दैन । नारायणकाजीसँग तपाईंले कुरा गर्दिन भन्नुको मतलव उठ उठ भन्नुभएको हो भनेर प्रचण्डलाई बाबुरामजीले भन्नुभयो । र गठबन्धनबाट बाहिरिनुभयो । अर्थराजनीतिको दार्शनिक हो बाबुराम । केपी ओलीजस्तो उखान टुक्का भन्न उहाँ जान्नुहुन्न । ताली उखान टुक्कामा बज्छ ।
वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता भन्छन्, संविधान संशोधन हुँदैन, तर मधेसमा संविधान संशोधन गर्छौं भन्दै मागिन्छ मत
प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी बाटोमा बम, ४ थान पेस्तोल र ३९ राउन्ड गोलीसहित तनहुँमा ३ जना पक्राउ